Hadisoana foana ny fanatisme sy ny radicalisme | Hery - Tsiky dia ampy |
Hadisoana foana ny fanatisme sy ny radicalisme
2009-06-08 @ 07:20 in Politika
Ekeko fa ny zavatra rehetra mafy nitranga ara-politika tao Madagasikara, toy ny fandrobana, ny faty olona, ny ady mivantana, dia mitarika hatrany ho amin'ny fanatisme, izay fitiavana tafahoatra ny olona tohanana na tsy fitiavana tafahoatra ny olona tsy tohanana. Dia arakaraka ny fitomboan'ny fanatisme ataon'ireo fanatiques-ny amin'ilay olona tsy tiana no hitomboan'ny fanatisme ataon'izay fanatique amin'ny olona tiany ihany koa. Izany hoe mitombo hatrany ny elanelana misy eo amin'ireo vondrona samy fanatiques mifanohitra. Ary rehefa lavitra loatra dia sarotra be ny hifanatonana.
Amin'izao mantsy ny TGV dia miha TGV be be kokoa hatrany. Izay naha TGV kely tao anatiny tao no nampitomboiny mafy ary raha teo aloha mba nihaino kely ny tsy TGV izy dia amin'izao nihena izany fahafaha-mihaino nananany izany. Toa izany koa ny TIM-ndRavalo izay mba nanaiky sosokevitra ihany teo aloha. Amin'izao dia mitombo be indray ny fitakiana dia mitady hiafara amin'ny hoe tsy hanaiky izahay raha tsy anay daholo ny hena REHETRA.
Eo anivon'ireo toe-javatra roa ireo dia TSY HITA INTSONY ilay mpanohitra "modérés" sy ilay mpanaraka "modérés". Takona tanteraka ireo izay nitaky ny hialan'i Ravalomanana amin'ny fomba demokratika. Ireo izay nieritreritra hoe tokony nosakanana tahaka an'i Zafy Albert izy, na nesorina tamin'ny alalan'ny fitsapan-kevi-bahoaka, na fifidianana mihitsy. Raha vao miteny ianao hoe esory Ravalomanana dia tonga dia voasokajy ho ao anatin'ny TGV izay. Toa izany koa, voasaron'ny safobe-mantsina hoe "mpitaky ny ara-dalàna sy famerenana an'i dada" ireo izay nieritreritra hoe avelao aloha Ravalomanana hamita ny mandat-ny dia esorina amin'ny alalan'ny fifidianana rehefa tsy tiana. Sy ireo nieritreritra hoe nisy ny tsy nety nataon-dRavalomanana kanefa nisy ihany koa ny zavatra tena niova nandritra ny fitondrany. Tsy afaka mieritreritra toa izany intsony ny olona fa tonga dia voasokajy ho TIM sy kamboty dada avy hatrany.
Ka hoy aho hoe, angamba tonga kosa ny fotoana tokony hihainoana an'ireo tsy be fiavy. Ny "majorité silencieuse" azo eritreretina hoe mizara roa, dia ireo izay tsy voatery ho TGV na dia tsy mila ny hiverenan-dRavalo aza, sy ireo izay tsy voatery ho TIM na dia manohana ny asa nataon-dRavalo aza. Asa nefa hoe amin'ny fomba ahoana.